ရန်ကုန် မြင်သာ ကညနဝန်းထဲက ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများ - The Lifestyle Myanmar
Home News ရန်ကုန် မြင်သာ ကညနဝန်းထဲက ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများ
ရန်ကုန် မြင်သာ ကညနဝန်းထဲက ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများ
ကျွန်​​တော်​ရဲ့ Alphard 3H/3417 ကားသက်​တမ်းတိုးဖို့ မြင်​သာကညနရုံးကို​ ရောက်​​နေပါတယ်​ ပွဲစားနဲ့မလုပ်​ပါနဲ့ပိုင်​ရှင်​ကိုယ်​တိုင်​​ဆောင်​ရွက်​ပါလို့နိုး​ဆော်​​နေပါတယ်။ ယာဉ်​စစ်​သည့်​အခါ​မော်​​တော်​ကားတိုင်းကိုဝိုက်​ဘာဖြုတ်​ခိုင်းပါတယ်​.ကိုယ့်​ မှာဘာမှမပါ​တော့.. ဖြုတ်​​ပေး​နေတဲ့​ကောင်း​လေး​တွေကို.၃၀၀၀ကျပ်​​ပေးရပါတယ်​…ကားတစီး၃၀၀၀..တ​နေ့အစီး ၂၀၀ အထက်​သ က်​တမ်းတိုး​နေပါတယ်​..တ​နေ့၆၀၀၀၀၀ကျပ်​ပါ။
ဒါနဲ့မင်းတို့ကွာ နပ်​​လေးနှစ်​လုံးဖြုတ်​တာ ၃၀၀၀​ဆို​တော့ များလှချည်​လားကွာ ဆို​တော့..ကျွန်​​တော်​တို့အကုန်​မရပါဘူး “ဦးစီး” ကိုလည်း​ပေးရလို့ပါတဲ့… ယာဉ်​သက်​တမ်းတိုးတာ.ဝိုက်​ဘာဖြုတ်​ခိုင်းတာ နားမလည်​ဘူးဗျာ..သက်​သက်​​ပေါင်း ပြီးလုပ်​စား​နေတာပါ…
ဒါနဲ့…အရင်​က သက်​တမ်းတိုးရင်​.ကညနမှာကွန်​ပြူတာထိုး ရဲမှု့ရှိ့မှ.ဒါဏ်​​ဆောင်​ရတာပါ…ခု​တော့ကားတိုင်းကို.ယာဉ်​ထိန်း ဋ္ဌာနဆီကို ကွန်​ပြူတာထိုးခိုင်း​နေပါတယ်​ တစီးကို ယာဉ်​ထိန်းဋ္ဌာနက ၁၀၀၀၀ ကျပ်​​တောင်းပါတယ်​..ဘာ​ပြေစာမှမ​ပေးပါ ဘူး… ကာအစီး၂၀၀ အနည်းဆုံး​ဆောင်​ရွက်​ရပါတယ်​ တ​နေ့၂၀၀၀၀၀၀ ကျပ်​ရပါတယ်​ …​ပေါ်တင်​​တောင်းစား​နေလို့…ဘာ​ကြောင့်​​တောင်းပါသလဲမ​မေးနိုင်​ပါဘူး တန်း​စီကြိတ်​ကြိတ်​တိုး​နေရလို့…အသက်​​တောင်​မနည်းရူ​နေရလို့ပါ…
ကညနဝန်းထဲကို လမ်း​လျှောက်​ပတ်​ပြီး ဟိုလူ့​မေးဒီလူ့​မေးနဲ့​ ဆောင်​ရွက်​ရပါတယ်​ တရုံးလုံးကလည်း ရွံ့ဗွက်​ချည်းပါ ​ပြောချင်​ တာက…လွယ်​တာကိုခက်​​အောင်​တမင်​လုပ်​​နေကြပါတယ်​…လာ​ရောက်​​ဆောင်​ရွက်​သူ​တွေကို တမင်​ခက်​ခဲ​အောင်​ ပွဲစားနဲ့လုပ်​​အောင်​..ဖန်​တီးထားပါတယ်​… ပြည်​သူ့အစိုးရလက်​ထက်​မှာလည်း..ကညန..ယာဉ်​ထိန်းရဲ ​ပေါင်းစား​နေကြပါတယ်​ အမြန်​ဆုံးစီစစ်​အ​ရေးယူ​ပေးပါလို့….
Source: Aung Kyaw Lwin
ကြှနျတျောရဲ့ Alphard 3H/3417 ကားသကျတမျးတိုးဖို့ မွငျသာကညနရုံးကို ရောကျနပေါတယျ ပှဲစားနဲ့မလုပျပါနဲ့ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျဆောငျရှကျပါလို့နိုးဆျောနပေါတယျ။ ယာဉျစဈသညျ့အခါမျောတျောကားတိုငျးကိုဝိုကျဘာဖွုတျခိုငျးပါတယျ.ကိုယျ့ မှာဘာမှမပါတော့.. ဖွုတျပေးနတေဲ့ကောငျးလေးတှကေို.၃၀၀၀ကပျြပေးရပါတယျ…ကားတစီး၃၀၀၀..တနအေ့စီး ၂၀၀ အထကျသ ကျတမျးတိုးနပေါတယျ..တနေ့၆၀၀၀၀၀ကပျြပါ။
ဒါနဲ့မငျးတို့ကှာ နပျလေးနှဈလုံးဖွုတျတာ ၃၀၀၀ဆိုတော့ မြားလှခညျြလားကှာ ဆိုတော့..ကြှနျတျောတို့အကုနျမရပါဘူး “ဦးစီး” ကိုလညျးပေးရလို့ပါတဲ့… ယာဉျသကျတမျးတိုးတာ.ဝိုကျဘာဖွုတျခိုငျးတာ နားမလညျဘူးဗြာ..သကျသကျပေါငျး ပွီးလုပျစားနတောပါ…
ဒါနဲ့…အရငျက သကျတမျးတိုးရငျ.ကညနမှာကှနျပွူတာထိုး ရဲမှု့ရှိ့မှ.ဒါဏျဆောငျရတာပါ…ခုတော့ကားတိုငျးကို.ယာဉျထိနျး ဋ်ဌာနဆီကို ကှနျပွူတာထိုးခိုငျးနပေါတယျ တစီးကို ယာဉျထိနျးဋ်ဌာနက ၁၀၀၀၀ ကပျြတောငျးပါတယျ..ဘာပွစောမှမပေးပါ ဘူး… ကာအစီး၂၀၀ အနညျးဆုံးဆောငျရှကျရပါတယျ တနေ့၂၀၀၀၀၀၀ ကပျြရပါတယျ …ပျေါတငျတောငျးစားနလေို့…ဘာကွောငျ့တောငျးပါသလဲမမေးနိုငျပါဘူး တနျးစီကွိတျကွိတျတိုးနရေလို့…အသကျတောငျမနညျးရူနရေလို့ပါ…
ကညနဝနျးထဲကို လမျးလြှောကျပတျပွီး ဟိုလူ့မေးဒီလူ့မေးနဲ့ ဆောငျရှကျရပါတယျ တရုံးလုံးကလညျး ရှံ့ဗှကျခညျြးပါ ပွောခငျြ တာက…လှယျတာကိုခကျအောငျတမငျလုပျနကွေပါတယျ…လာရောကျဆောငျရှကျသူတှကေို တမငျခကျခဲအောငျ ပှဲစားနဲ့လုပျအောငျ..ဖနျတီးထားပါတယျ… ပွညျသူ့အစိုးရလကျထကျမှာလညျး..ကညန..ယာဉျထိနျးရဲ ပေါငျးစားနကွေပါတယျ အမွနျဆုံးစီစဈအရေးယူပေးပါလို့….
ရန်ကုန် မြင်သာ ကညနရုံး
Previous articleခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ရေး အကြံပြုချက် များလွန်း၍ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်ရှိဟု တပ်မတော်သတိပေး
Next articleထိုင်းနိုင်ငံ ကေတီဗီတွင် မတရားခိုင်းခံနေရသည့် မြန်မာနှင့် လာအိုမိန်းကလေးများကို ကယ်ထုတ်